Dhakhaatiirka dibedda wax ku soo bartay oo Iswiidhen ku soo badanaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Bertil Enevåg Ericson / SCANPIX
Dhakhaatiirka dibedda wax ku soo bartay oo Iswiidhen ku soo badanaya
La daabacay torsdag 25 juli 2013 kl 10.27
Dadka jaamacadaha ka dhigta dakhtarnimada ayaan ku filnayn in ay kabaan baahida daryeelka caafimaad ee ka jirta Iswiidhen. Sidaas awgeed ayey ruqsadaha dhakhaatiirka oo ay Hay’adda Qaranka ee Arrimaha Bulshadu bixisat ahaayeen in ka badan boqolkiiba konton dhakhaatiir dalka dibeddiisa wax ku soo bartay.
- Dhakhaatiirtaan dibedda wax ku soo bartay la’aantood waxaa Iswiidhen ka jiri lahayd dhakhaatiir la’aan aad u weyn. Marka waa wax wanaagsan oo loo baahan yahay inaan dhakhaatiirtaas dalka ka hawlgelinno. Waxaase la isweyddiin karaa sababta ay Iswiidhen u soo saari weydey dhakhaatiir ku filan oo dalka wax ku bartay, ayuu yiri Svante Pettersson oo baare ka ah Ururka dhexe ee dhakhaatiirta Iswiidhen.
Svante Pettersson wuxuu sheegay in ay muuqatey in ay dhakhaatiirta dibedda wax ku bartay ay soo badanayeen oo wixii ka dambeeyey sannadkii 2003 ay dhakhaatiirta ruqsadaha la siiyo ka ahaayeen in ka badan boqolkiiba konton. Kuwo badan oo dhakhaatirtaas ka mid ah ayaa ah soogalooti, halka ay iswiidhish badani ku soo bartaan dhakhtarnimada dalka dibeddiisa.
Laba toddobaad ka ayaa la soo bandhigay ardayda loo qaatay waxbarashada dhakhtarnimada. Waxayna gaarayeen in ka yar 1000 qrday. Boosaska ka bannaan waxbarashada ee jaamacadaha xooga ayey soo kordheen sanooyinkii dambe, laakiin waxaa weli aad u adag shuruudaha shahaadooyinka looga baahan yahay in lagu waxbarashada dhakhtarnimada. Sidaas awgeed ayey dad badani u arkaan fursadda keliya oo ay ku gaari karaan hammigooda xirfadood in ay tahay in ay dibedda ku soo bartaan dhakhtarnimada. Sidaasna waxaa yiri Peter Honeth oo ah gacanhayaha wasiirka waxbarashada.
Dhanka kale Marie Wedin oo guddoomiye u ah Ururka dhexe ee dhakhaatiirta Iswiidhen ayaa welwel ka muujisay in habkaan dhakhaatiirta dibedda wax ku soo bartay ku soo galaan shaqada loo arko mid eexasho ku salaysan. Waxaa tusaale u noqon kara haddii qof dhakhtarnimada ku soo bartay matalan Hangari uu Iswiidhen yimaado isagoo wata shatiga dhakhtarnimada, markaas uma baahan doono in uu maro tababarka dhakhtarnimada oo ka horreeya qaadashada shatiga loona yaqaan AT.